China otomatiki pakona pasting muchina fekitari uye bhizimisi | Sunkia
Eyeshadow bhokisi kumucheto kupeta Muchina
Otomatiki anoona bhokisi ekumisikidza muchina
Otomatiki Yekumhanya Yekukurumidza UV Spot Varnishing Machine (Dual ...
Yakazara otomatiki Yekumhanyisa Makumbo-emusoro UV Varnishing M ...
Otomatiki Yekumhanyisa Yekumhanyisa Varnishing uye Calendering Machine
Otomatiki Yakakwira-inomhanya Calendering Machine
Otomatiki pakona pasting muchina
Muchina uyu unonyanya kushandiswa kumativi mana otomatiki kukona kuiswa. Inonyanya kushandiswa kumabhokisi enharembozha, mabhokisi ezvipo, mabhokisi ezvishongo, mabhokisi ekupfeka, mabhokisi eshangu, mabhokisi ekuzora uye mamwe mabhokisi. Iyo yakazara servo system uye yemunhu-muchina interface inoona iko kurongeka, kukwirira, kumisikidzwa uye mashandiro ehumwe dhizaini.
Muchina uyu unonyanya kushandiswa kumativi mana otomatiki kukona kuiswa. Inonyanya kushandiswa kumabhokisi enharembozha, mabhokisi ezvipo, mabhokisi ezvishongo, mabhokisi ekupfeka, mabhokisi eshangu, mabhokisi ekuzora uye mamwe mabhokisi.
Iyo yakazara servo system uye yemunhu-muchina interface inoona iko kurongeka, kukwirira, kumisikidzwa uye mashandiro ehumwe dhizaini. Kushanda kuri nyore, goho repamusoro uye nekukurumidza kushanda.
Kune mazhinji emabhokisi emabhizinesi anochengetedza zviwanikwa zvakawanda zvevashandi uye nekuvandudza mashandiro ekugadzirwa uye kugadzikana kwehunhu hwechigadzirwa, bhizinesi rebhizinesi rinofanira kusarudza yakanaka mubatsiri bhokisi.
1. Iyo muchina interface sisitimu inoshandiswa kuitira mashandiro emuchina wese. Ndizvonyore kudzidza, nyore kunzwisisa uye nyore kushandisa.
2. Iyo izere servo drive control system uye PLC kuronga inoona chaiyo uye mashandiro echigadzirwa.
3. Iko kugadzirwa kwemuchina wemuchina uyu wakapetwa katatu zvakapetwa kupfuura zveiyo chinyakare ruoko.
4. Iyo bepa yekudyisa sisitimu inotora iyo inobhururuka mhando pepa yekudyisa system, iyo inogona kunyatso kugadzirisa kugadzirwa kuburitsa goho
5. Bhandi rekutakura rinoshandiswa kuchengetedza basa nemazvo. Munhu mumwe chete ndiye anogona kupedzisa mashandiro ese.
6. Iko kushandiswa kweanotakurwa mabheyari uye zvemagetsi zvikamu zvekuvandudza mhando yemuchina uye nekuwedzera hupenyu hwebasa.
7. Zviri nyore kufamba nezvikamu zvitatu (bepa yekudyisa sisitimu, mam injini uye kuchaja system).
8. Transparent tepi, kraft bepa bhandi zvakajairika, kune chako chigadzirwa chinoda kupa dzakasiyana siyana sarudzo.
Kunonyanyisa saizi (Max)
PLC Kubata skrini murume-muchina system
60-100 pcs / min
900 x 1260 x1950mm
Pashure: Semi-otomatiki rakaomarara bhokisi rekumaka muchina ne robot
Zvadaro: Otomatiki gluing muchina
Zvizere otomatiki gungano muchina
Chinyorwa chamfering muchina
Makona mana emucheto muchina
Semi-otomatiki rakaomarara bhokisi rekumaka muchina ne r ...
Otomatiki Thermal Firimu Lamination Machine (singl ...